Wasaaradda Shaqada oo Dalka oo dhan ka bilowday olale socon doona 16 maalmood | Somaliland.Org
November 27, 2011	“Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu waxay ku baaqaysaa in la joojiyo dhammaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka Somaliland”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland ayaa bilowday olale socon muddo 16 maalmood ah oo ku wajahan la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah Haweenka iyo qeybaha nugul ee bulshada.
Olalahaasi wuxuu bilaabmay 25-kii November waxayna dhammaan doontaa 10-ka December 2011 oo ku beegan maalinta xuska xuquuqul insaanka dunida oo si weyn looga xusi doona dhammaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland. Wasaarada Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu waa Wasaaradda hormuudka u ah una qaabilsan qarankan Somaliland samaynta, horumarinta iyo dhaqan gelinta siyaasadda qaran ee lagu horumarinayo bulshada reer Somaliland sidoo kalena lagu difaacayo qaybaha bulshada ee nugul sida carruurta, dumarka, dadka da’da ah, kuwa lixaadka la’ ama maskaxda ka jirin, kuwa laga tirada badan yahay iyo dhammaan qaybo bulsho ee u baahan fiiro gaar ah iyo daryeel intaba. Waxaa kale oo Wasaaraddu ka shaqaysaa u doodista xuquuqda qaybaha bulsho ee u baahan in la difaaco danahooda iyo sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen inay dadkaasi helaan xuquuqdooda iyo daryeel koodaba. Waxay kale oo wasaaraddu u xilsaan tahay soo saarista iyo hiregelinta shuruucda iyo xeerarka lagu difaacayo qaybahaas nugul ee bulshada kamid ah. Sidaas awgeed, Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu iyadoo qaranka uga masuul ah samaynta iyo ku dhaqanka siyaasadda lammaanaha ee Somaliland (The Gender National Policy). Waxaana wasaaraddu ahmiyada koowaad siisay siyaasadda lammaanaha Somaliland in la joojiyo oo la xakameeyo tacadiyada ka dhanka dumarka taasoo ku salaysan in la faro xumeeyo, in la jidh dilo, in la maskax dilo, in la bahdilo ama la niyad jebiyo, iyo in la yareeyo dhacdooyinka ka dhan ka ah xuquuqda haweenka sida kufsiga iyo dagaalka ka dhaca guryaha( reducing incidents of rape and domestic violence). Siyaasadda lammaanaha Somaliland waxaa la sameeyey sannadkii 2008kii, waxaana horumarin lagu sameeeyey 2009kii, markii xukuumadda KULMIYE oo gadhwadaha u yahay madaxweyne Axmed Siilaanyo talada la wareegtayna waxay markiiba xoojisay oo ay dardar gelisay siyaasaddii lammaanaha. Waxaana xukuumaddu ku dhiirigelisay ururada bulshada, ururada maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ahba inay wadashaqeyn sameeyaan oo la abuuro dallad ay ku midoobaan hay’daha ka hawl gala joojinta xadgudubyada ka dhanka ah dumarka( Gender Based Violence Working Group) taasoo ay hay’adda jimciyada quruumaha ka dhaxaysa ee UNHCR ay hormuud u tahay. Wasaarada Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu waxay kale oo bishii June 2011 ay samaysay dallada ururada ka shaqeeya joojinta gudniinka fircooniga ah ( FGM working group) oo ay xubno ka yihiin ururada haweenka ee ka hawlgala joojinta gudniinta fircooniga ee dallada NAFISa hormuudka u tahay.
Waxaana Wasaaraddu ka shaqaynaysaa sidii gebi ahaanba loo joojin lahaa isticmaalka gudniinka fircooniga ah, waxaana hadda Wasaaraddu ay bilawday habkii loo cidhib tiri lahaa gudniinkaas fircooniga ah oo xaddudub ku ah xuquuqda insaanka islamkaasna dhaawacyo halis ah oo jidh ahaan iyo maskax ahaanba soo gaadhsiiya haweenka. Waxaanan ka codsanayaa in bulshada reer Somaliland ay joojiyaan ku dhaqanka gudniinka fircooniga ah oo dhibaato badan oo caafimaad gaadhsiiya dumarka. Iyadoo Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu ka duulaysa arrimahaas aan kor ku soo sheegnay, waxay qaban qaabisay shirar kala duwan oo loogu diyaar garoobayo qaban qaabada 16ka cisho ee olalaha waxaana aan ku faraxsanahay in lasameeyey guddi qaran oo ka kooban 13 xubnood oo isugu jira hay’adaha dawliga ah, kuwa jimciyada quruumaha ka dhaxaysa, ururada bulsho ee Somaliland iyo kuwa caalamiga ah ee ka hawl gala Somaliland. Olalahan 16 cisho oo ay hormuud u noqon doonto Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu waxay ka codsanayaa inay sida ugu dhakhsaha badan u hawl galaan guddidaas qaran ee inoo suurtagelin doonta qaban qaabada olalahan. Olalahan oo lagu qaban doono dhammaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland waxaan ka codsanayaa dhammaan hay’adaha qaranka ee ay khusayso, saxaafadda madaxa bannaan, ururada bulshada iyo dhammaan shacabka Somalilandba inay gacan ka gaystaan olahahaas lagu xoojinaayo xuquuqul insaanka sidoo kalena lagu dhiirigelinayo in la joojiyo tacadiyada ka dhanka ah haweenkeena oo ah hooyooyinkeena aan jecelnahay.
Waxaanan soo dhawaynayaa taladii la soo jeediyey ee la xidhiidhay in la fududeeyo guurka si loo dhiiriliyo in dhalinyaradu is guursato oo loo abuuro qoysas cusub, taasoo lasoo jeediyey in la dhimo qiimaha meherka iyo yaradkaba, waxaan kale oo codsanaynaa in iyana talada lagu daro in raggu uu kasoo baxo masuuliyadda fuusha markuu yeesho xaas iyo carruur oo raggu ay dammaanad qaadaan daryeelka iyo masruufka dumarka iyo carruurta oo ah masuuliyad markastaba si gaar ah u saaran ragga. Tan oo ah arrin habboon in la dhiirigliyo markasta oo laga hadlaayo mawduucan. Waxaan ogsoonahay in horumarka bulsho ee Somaliland ay caqabad ku tahay Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah, taas oo wiiqday awoodii dhaqaale ee xukuumadda dhexe ee Somaliland. Waxaanan ogsoonahay in dadka ugu badan ee arrintani ku keentay saamaynta ba’an ay yihiin dumarka, carruurta iyo qaybaha kale ee bulshada ee nugul. Waxaanan ugu baaqayaa bulshada caalamka inay dib u eegan siyaasadda ku aadan Somaliland oo ay Somaliland siiyaan aqoonsi buuxa si ay xukuumaddu u hesho awood ay ku daryeesho qaybaha bulsho ee nugul ee u baahan in lasiiyo fiiro gaar ah. Waxaanan eebbe ka baryayaa inuu inoo hawlyareeyo olalahaas balaadhan ee lagu xoojinaayo xuquuqul insaanka. Waxaanan ugu danbayn idiin rajaynaa guul, horumar, bash bash iyo barwaaqo.”
Previous PostRaysal Wasaaraha Jabuuti oo Kulan Qado-sharaf ah u sameeyay Weftigii Madaxweynaha SomalilandNext PostMadaxweyne Geelle Oo kulan saacado socday la yeeshay Madaxweyne Siilaanyo	Blog